Hello Nepal News » युरोपको एक मात्रै अपराजित एसी मिलानलाई रोनाल्डोको ‘रातो बत्ती’ !
युरोपको एक मात्रै अपराजित एसी मिलानलाई रोनाल्डोको ‘रातो बत्ती’ !
इटालियन सिरी ए लिग फुटबलमा बुधबार राति लिगका दुई बलिया टोली एसी मिलान र युभेन्टस सिजनको पहिलो खेल खेल्दैछन् । हाल लिग लिडर रहेको मिलानले पाँचौं सथानको युभेन्टसलाई आफ्नो मैदानमा स्वागत गर्दैछ । मिलान जारी सिजन युरोपियन टप–५ लिगमा एक मात्रै अपराजित टिम हो । हाल मिलान १५ खेबाट ३७ अंक बनाएर शीर्ष स्थानमा छ भने एक खेल कम खेलेको युभेन्टस २७ अंकसहित पाँचौंमा छ ।
सो खेलअघि युभेन्टसका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले मिलानसँगको खेललाई लिएर उत्साहित धारणा राखेका छन् । अघिल्लो दिन उडिनेसलाई उसकै घरमा १–४ ले हराएपछि मिडियासँग कुरा गर्दै पोर्चुगिज फरवार्डले मिलानको घरबाट फर्किंदा आफूहरू जितेर फर्किने भन्दै मिलानलाई चुनौती दिएका छन् । रोनाल्डोले सान सिरोमा युभेन्टसले सुखद् नतिजा निकाल्ने दाबी गरेका छन् ।
वर्षको पहिलो खेलमा उडिनेसविरुद्ध खेल्दा रोनाल्डोले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै २ गोल र १ असिस्ट गरेका थिए । खेलछि उनलाई मिलानसँगको खेलबारे सोधिएको थियो । ‘मिलान ? अवश्य पनि, यो एक ठूलो खेल हुनेछ । किनभने, उनीहरू अहिले धेरै राम्रो गरिरहेका छन् । उनीहरू टेबलको शीर्ष स्थानमा छन्,’ रोनाल्डोले भने, ‘तर, म मेरो टिममाथि विश्वास गर्छु । जब हामी सान सिरोबाट फर्किन्छौं, जितका साथ फर्किन्छौं । हामीलाई यो जित आवश्यक छ ।’
नयाँ वर्षको पहिलो खेलबाट टिमले राम्रो दिशा तय गरेको पनि रोनाल्डोले बताए । ‘नयाँ वर्षको सुरुआत हामीले राम्रोसँग गरेका छौं । यसले टिम सही दिशामा छ भन्ने देखाउँछ । हामी यो आत्मविश्वास र लयलाई हरेक खेलमा कायम राख्न चाहान्छौं । सान सिरोमा हामीलाई आजकै जस्तो एकता र ऊर्जा चाहिन्छ,’ रोनाल्डोले थपे, ‘युभेन्टस तयार छ ।’
जारी सिसन रोनाल्डोले सिरी ए लिगमा ११ खेलबाट १५ गोल गरिसकेका छन् । उनी लिगको एक सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् । उनले यो सिजन सिरी ए लिग र च्याम्पियन्स लिग गरी मात्रै १५ खेलबाट १९ गोल र ४ असिस्ट गरेका छन् । रोनाल्डो सन् २०१८ मा रियल मड्रिडबाट युभेन्टस पुगेयता हालसम्मकै बेस्ट फर्ममा खेलिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति २१ पुष २०७७, मंगलवार १५:५६